Ny Mikoyan-Gurevich MiG-27 dia fiaramanidina fanafihana amin'ny tany izay avy amin'ny mpiady Miangaly-Miaro-Flosiogera MiG-23. Niseho tamin'ny taona 1970, naorina MiG-27 ny kopia MiG-900, ka ao anatin'izany ny 165 amin'ny fahazoan-dàlana ao India. Mifanaraka amin'ireo vokatra IRIS izay ananantsika eto add-on miavaka tsara kalitao ity fonosana ity maimaim-poana. Aza hadino ny mamaky ny boky (amin'ny teny anglisy) mba hahafahanao mampihatra ny fampiasanao ny MIG-27, ny modely maromaro dia misy amina feo mahazatra sy fanavaozana isan-karazany. Raha olona mahatoky marina an'ny FS2004 ianao dia mendrika ny hahita ity vokatra ity satria voaova ho an'ny FS2004 tanteraka.
Video Mig-27 rares sary (tena)
Par Model: Brett Hoskins Textures: Mike Mahat (suite dans readme)
Mikoyan-Gurevich Mig-23 Sovietika FS2004
11346 4.00 (4)
Mig-31 Firefox pifandraisan FS2004
16305 3.56 (9)
Nosoratan'i Owen Smoot, firaketana nataon'i Kurt Beswick
Nosoratan'i Jan Moravec
Nosoratan'i Kazunori Ito & Spike
Sukhoi Su-34 Fitokonana Flanker FS2004
Nosoratan'i Bowe Tyson
Downloads 5 993